Ukuphilisa kunye nemilingo ye-pyrite
I-Pyrite iluhlaza kwaye iluhlaza okwesibhakabhaka, efana ne-chalcopyrite okanye igolide, ngokuqhelekileyo ingaba neyona golide. Eli litye liyimfuneko ebalulekileyo yokuvelisa i-sulfuric acid. Kwaye izixhobo eziphambili ze-pyritic, ezifunyenwe kwinkqubo, zisetyenziselwa ukuveliswa kwekhonkrithi. I-Pyrite ngumthombo obaluleke kakhulu we-cobalt, oku kuthetha ukuba ezinye ze-selenium kunye negolide nazo zichithwe kwi-pyrite ores.
Iifosti ze pyrite. Ngokuqhelekileyo kuvela kwiindawo ezivela kwimithombo ye-hydrothermal, iipositi ze-pyrite. Iifomiti ezinkulu zepirrite ziseSweden, eNorway, eRashiya, ngakumbi kwii-Urals, eSpain, eFransi, eJamani, e-USA, eAzerbaijan.
Izakhiwo zonyango. I-Pyrite ifana negolide, ngoko kuya kuba nefuthe ekuncedeni kwinkqubo yesantya ephakathi. Oogqirha babantu bakholelwa ukuba kuyanconywa ukuba banxibe iimveliso ze-pyrite xa inkqubo ye-nervous iphelile, bayakwazi ukuphakamisa ithoni, bazalise ngamandla amakhulu, bakhulise ukusebenza kakuhle, basuse ubuthongo, basuse ukunganakwa. Musa ukugqoka ilitye kulabo abaxhomekeke ekukhunjisweni ngokweqile nangokwemvakalelo. Kukholelwa ukuba imikhosi ye-pyrite inondla umntu ngamandla anika ubomi, ukulungelelanisa iinkqubo zangaphakathi zomzimba.
Izakhiwo zobugqi. I-Pyrite ukususela kumaxesha amandulo kwakucingwa njengento enamandla kakhulu yomlingo. Ngama-Middle Ages, kwakudla ngokusetyenziswa ngama-alchemists ngenxa yeempawu zabo "zamadoda" (i-pyrite sele ithathwa njengelitye lendoda). Siyabonga kubo, i-pyrite inceda ukufumana amandla amakhulu ngokomzwelo kumnini wayo, ekufuneka uphathwe ngononophelo. Eli ilitye alikwazi ukugqithwa ngaphezu kweentsuku ezi-3 ngokulandelana ngenxa yokuba ukunyuka okukhulu nokuvakalelwa kunokuchaphazela umntu. Le mineral ayithandi ukuhlala kunye nezinye iikristali, eziyichaphazelayo kwezinye iiminerali ezininzi. Ngaphandle kwe-hematite kunye nenyoka. I-mystics yanamhlanje iluleka ukuba athenge amatye ngaphandle kwemichilo kunye nokutyunjwa, ngaphandle koko abazenzi ukuqikelela oko kuza kuzisa i-mineral-inzuzo okanye inzakalo. Kukho uluvo lokuba ngenxa yepropati ye-pyrite ukunika abantu iimpawu ezingalunganga, akufanele zigqweke nonke.
Ngokuphathelele ukufundisa ngeenkwenkwezi, abavumisi beenkwenkwezi abanakucinga ngokugqibeleleyo ukuba yimuphi umqondiso wezodiacal uphawu olufanelekileyo.
Ii-Amulets kunye neeplrite. Njengomkhuseli kunye neengqungquthela, i-pyrite ingasetyenziselwa kuphela abantu abanesazela esicacileyo, intliziyo enentliziyo kunye nentliziyo ebonisa intliziyo, kunye neengcinga ezinzulu. I-Pyrite inceda umnini wayo ukuba asuse uloyiko olungadingekile, aphume kwiinqununu, athole ukuzithemba kuye ngokwakhe, nangamakhono akhe. Nangona kunjalo, ngenxa yemiphumo enokuphikisana xa ugqoke eli litye, akukhuthazwa ukuba uqhagamshelane nalo.
Iindlela ezintsha zonyango
Kutheni ungafaka indlebe kunye nendlela yokujongana nayo?
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye halite
Iveki yaseMercedes-Benz yaseRussia elisondeleyo iya kuba yiJubhi
Iyeza zonyango: unyango nge-nettle
I-charm charm yaseSetyini ngokubonakaliswa kweZodiac
Ukupheka irayisi kwi-multivariate?
Ngendlela efanelekileyo ukucoca ubomvu obumhlophe?
Intlanganiso yabazali: indlela yokuthatha umntwana
Ziziphi izicwangu zokunyusela i-salon zingcono
Fettuccine kunye nenkukhu
I-Recipe ye-soup yemifuno yehlobo eline-slim figure ukusuka "kumenzi" uSasha Savelyeva
I-Zrazy yenkomo ngeeshizi
I-Apple pie ne-cognac
Dessert yase Orange